မိုဘိုင်းစာပို့ခြင်းခိုင်မာလာ! | Martech Zone
စနေနေ့, မေလ 3, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကြေးနန်း မကြာသေးမီကမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူ ၆၄% သည်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းကိုမသုံးကြကြောင်းတွေ့ရှိရသည် ငါဒီ post ကိုသုတေသနပြုနေတုန်း site အနည်းငယ်ရှိတာကိုငါအံ့သြသွားတယ် အံ့အားသင့် က ဂဏန်း.
ငါမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့ဘလော့ဂါတချို့ထက်စာရင်သက်တမ်းပိုကြီးတာဖြစ်ပေမဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်အံ့သြသွားတယ်။ တကယ်တော့သုံးစွဲသူ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာတကယ်ကိုအံ့သြသွားတယ် ကိုပြု စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်မည်လော။ တယ်လီဖုန်းအသုံးပြုသူ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကြေးနန်းစက်ကိုတစ်ခါမျှမသုံးခဲ့ကြသည့်အတွက်တုန်လှုပ်သွားရသည်
မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူရာခိုင်နှုန်းသည်စာမတတ်ကြပါ၊ ပွောဆို အခြားအဆုံးအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်အတူကြောင်းနည်းနည်းနေရာလေးကို box ထဲမှာအချိန်မှန်။ ထိုသူတို့ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့လက်မတက်ကျဉ်းမြောင်းစရာမလိုပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့သင်ဟာတစ်ယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောချင်ပေမယ့်တကယ်တမ်းစကားမပြောချင်ရင်စာပို့တာဟာအဆင်ပြေပါတယ်။
ငါစာငတ်နေတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ကလေးတွေကသူတို့သူငယ်ချင်းတွေကိုအစဉ်မပြတ်စာပို့ကြတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုခေါ်တာထက်အစည်းအဝေးမှာစာပို့တာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ စာပို့တာကထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုနည်းပါးပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုပဲစာပို့တယ်။ ထိုအမြင့်တက်နေသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအချိန်အတန်ကြာရုန်းကန်နေရသည်။ စားနပ်ရိက္ခာ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်စည်ကားခြင်းကစာသားအခြေပြုကူပွန်များနှင့်သတိပေးချက်များကိုမည်သို့တုံ့ပြန်မည်နည်း။ ငါဥက္ကSmall္ဌအာဒံကိုအသေးစားနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် တောင်းဆိုမှုအားဖြင့်စာသား, ယနေ့နံနက်နှင့်အာဒံပိုက်လိုင်းကိုဆင်းလာမယ့်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမှုအရာအပေါ်ကဗျာဆန်ဆန်။
Request by Text သည်မိုဘိုင်းကိုစိတ် ၀ င်စားသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာမာရသွန်သုံးစွဲသူများအားသူတို့၏မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွင်စာသားများထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏နောက်ဆုံးသောကာလကိုပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အချိန်ကိုရှာဖွေရန်အိမ်ပြန်ရောက်သည်အထိစောင့်စရာမလိုပါ။
အာဒံက SMS vs MMS ကိုဆက်ရှင်းပြသည်။ ဘယ်မှာလဲ စာတို (Short Message Service) အက္ခရာ ၁၆၀ ကိုစာလုံးပေါင်း ၁၆၀ ပြန်ပို့နိုင်တယ်။ MMS ကို (Multimedia Messaging Service) သည်ရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုနှင့်အသံများကိုနောက်သို့လှည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
မိုဘိုင်းပံ့ပိုးပေးသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကွန်ယက်များကိုမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြသည် 3g၊ ဘာသာပြန်ခြင်း = တတိယမျိုးဆက်) နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့်သူတို့၏ဖန်သားပြင်များကိုဆက်လက်မြှင့်တင်ပေးသည်။
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့မယ့်အစား ငါးကိုတွန်း နေ့လည်စာစားချိန်တွင်မန်နေဂျာမှတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေသည့်ဗီဒီယိုတို (သို့) ပန်းကန်၏ဗီဒီယိုတိုလေးပို့နိုင်သည်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှကူပွန်ကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရန်အတွက်ဖုန်း၏ရှေ့မှောက်၌စာဖတ်သူကိုလှန်လှောပေးနိုင်ရန်သင်ကနောက်ဆုံးပေါ်ဘားကုဒ်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုထားသောစိတ်ကြိုက်ကူပွန်ကိုသင်ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိပြည်ပသို့စာပို့ခြင်းအတွက်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုသူထင်မြင်ပါသလားဟုသူအားကျွန်ုပ်မေးခဲ့သည်။ သင်၏ inbox အတွင်းရှိ spam ပမာဏကိုတစ်ချက်ကြည့်ခြင်းဖြင့်စာပို့ခြင်းသည်ငွေမကုန်ကျပါကကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းများဖြည့်လိမ့်မည်။
Tags: မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုဘိုင်း smsစာတိုsms စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရိုက်
My Blog Posts အတော်များများသည် Verbose ဖြစ်သည်
မေလ 3, 2008 မှာ 11: 58 pm တွင်
ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဟာဒီလူကြီးတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ စာကိုမှလွဲပြီးမိုဘိုင်းကိုကျွန်တော်မသုံးပါဘူး။ ယဉ်ကျေးတဲ့အရာအဖြစ်အသုံးဝင်ပါတယ်။ လက်ခံရရှိသူကအလုပ်ကိုရပ်ပြီးနားထောင်ဖို့သူတို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အီးမေးလ်ကိရိယာတစ်ခုအနီးတွင်…
မေလ 4, 2008 မှာ 6: 55 AM
အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်မိုဘိုင်းအကြောင်းအရာသို့မဟုတ် IM ကိုအာရုံစိုက်ပါကသင်၏စစ်တမ်းသည်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့မှုနည်းပါးကြောင်းကိုထင်ဟပ်စေလိုသည်။ သို့သော်ဘက်လိုက်မှုမရှိသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော CTIA မှလတ်တလောကိန်းဂဏန်းများအရအမေရိကန်ဖုန်းပိုင်ရှင် ၂၆၂ သန်းအနက်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျသန်း ၁၇၆ သန်းကျော်ပြနေသည်။ ယူအက်စ်တွင်တစ်မိနစ် ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်
ယူအက်စ်တွင်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသည်နှစ်စဉ် ၁၅၁% နှုန်းဖြင့်ကြီးထွားလာသည်။ အသက် ၃၀ မှ ၄၅ နှစ်ကြားလူငယ်များသည် ၁၃၀% နှုန်းဖြင့်တိုးတက်နေသည်။
US ၏အဓိကပံ့ပိုးပေးသူ ၃ ဦး သာလျှင် Mass MMS ကိုခွင့်ပြုထားပြီးအဓိကကစားသမားအများစုမှာမူ ၃၀% ထက်နည်းသော MMS များပို့ဆောင်ရာတွင်စိန်ခေါ်မှုများကြောင့်၎င်းတို့၏ဒေတာများရရှိရန်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။
မိုဘိုင်းအကြောင်းအရာများကိုဒေတာအသုံးပြုခြင်းသည်မိုဘိုင်းစျေးကွက်အတွက်အနာဂတ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စင်ကြယ်သောဆက်သွယ်ရေးအတွက် SMS နှင့်စာသားမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောလျှောက်လွှာအရေအတွက်များပြားလာသည်။
လက်ရှိတွင်အမေရိကန်ဖုန်းများ၏ ၅၀% နီးပါးသည်ဒေတာစွမ်းရည်ရှိကြသည်။ သို့သော်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၀% ကသာဒီအင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ရန်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေပေးကြသည်။
မေလ 4, 2008 မှာ 3: 52 pm တွင်
ဂရိတ်စာရင်းဇယား, Rbowen! ဤအကိန်းဂဏန်းများမျှဝေဖို့အချိန်ယူဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါခေါင်းစဉ်အပေါ်အဘယ်သို့ငါတတ်နိုင်သမျှရှာရန်ပိုက်ကွန်ကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြရတယ်။ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသည်တကယ့်ကိုထူးခြားသောအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ခေတ်စားလာစေရန်အတွက်နည်းလမ်းများရှိသေးသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤနှစ်သည်!